Iyo Inotungamira Inotungamira Kugadzira Mitemo Yengoro Yekutengera muAdobe Commerce (Magento) | Martech Zone
Kugadzira zvisingaenzaniswi zvekutenga zviitiko ndiyo yekutanga mishoni yechero ecommerce bhizinesi muridzi. Mukutsvaga kuyerera kwakadzikama kwevatengi, vatengesi vanounza mabhenefiti akasiyana-siyana ekutenga, akadai sezvideredzwa uye kukwidziridzwa, kuti kutenga kunyanye kugutsa. Imwe yenzira dzinogoneka dzekuita izvi ndeyekugadzira mitemo yengoro dzekutengesa.
Isu takanyora gwara rekugadzira kutenga mitemo yengoro in Adobe Commerce (yaimbozivikanwa seMagento) kuti ikubatsire kuita yako yekudzikisa system ishande zvisina mutsetse.
Ndeipi Mitemo Yengoro Yekutengera?
Mitemo yemitengo yengoro yekutenga ndiyo mirairo ye admin inobata nekuderedzwa. Inogona kushandiswa mushure mekupinda coupon / promo kodhi. Ecommerce webhusaiti mushanyi achaona iyo Nyorera Coupon bhatani mushure mekuwedzera zvigadzirwa kungoro yekutenga uye iyo yakaderedzwa huwandu pasi peiyo subtotal mutengo bar.
Kugadzira kana kugadzirisa mitemo yemitengo yengoro neMagento zviri nyore, kana iwe uchiziva kwekutanga kuenda.
Mushure mekupinda mune yako admin dashboard, tsvaga iyo Marketing bar mune yakatwasuka menyu.
Mukona yepamusoro kuruboshwe, iwe uchaona iyo kushambadza unit, inovhara catalog uye mitemo yengoro yemitengo. Enda kune yekupedzisira.
Wedzera A New Cart Rule
Tora iyo Wedzera Mutemo Mutsva bhatani uye gadzirira kuzadza iyo yakakosha kuderedzwa ruzivo mune akati wandei minda:
Manage Coupon Codes.
Kuzadza Rule Ruzivo
Pano iwe uri kuzadza muhuwandu hwematapureta.
Tanga ne Mutemo Zita uye wedzera tsananguro pfupi yayo. The tsananguro munda unozongoonekwa pane iyo Admin peji kwete kushungurudza vatengi nemashoko akawandisa uye uzvichengetere iwo.
Gonesa mutemo wemutengo wengoro nekudzvanya switch pazasi.
Muchikamu cheWebhusaiti, iwe unofanirwa kuisa webhusaiti iyo mutemo mutsva uchaitwa.
Ipapo inoenda kusarudzwa kwe Mapoka eVatengi, anokodzera kuderedzwa. Ziva kuti iwe unogona nyore nyore kubatanidza boka revatengi idzva kana ukasawana iyo yakakodzera sarudzo mune yekudonha-pasi menyu.
Kuzadzisa chikamu cheKuponi
Paunenge uchigadzira mitemo yengoro dzekutenga muMagento, unogona kuenda kune iyo Hapana Kuponi sarudzo kana kusarudza a Specific Coupon kurongedza.
Zadzai mu Zvishandiso paMutengi munda, kutsanangura kuti kangani mutengi mumwe chete anogona kushandisa mutemo.
Sarudza mazuva ekutanga uye ekupera kwemutemo kudzikamisa nguva yekuwanikwa kwemutengo wakaderera
Isa coupon code.
Isa manhamba e Inoshandisa Per Coupon uye / kana Inoshandiswa Nemutengi kuve nechokwadi kuti mutemo haupfuurire.
Imwe pfungwa yekuteerera ndeye coupon auto-generation sarudzo, iyo inoita kuti zvikwanise kugadzira akasiyana makuponi makodhi mushure mekuzadza chimwe chikamu chekuwedzera. Manage Coupon Codes zvinotsanangurwa pazasi.
Kuisa The Rule Conditions
Muchikamu chinotevera, iwe unofanirwa kuseta mamiriro ekutanga ayo mutemo uchashandiswa. Kana iwe uchida kuseta chaiwo mamiriro engoro yekutenga, unogona kugadzirisa iyo Kana ese aya mamiriro ari echokwadi mutsara nekusarudza dzimwe sarudzo pane zvose uye / kana zvechokwadi.
Baya Sarudza chimiro kuwedzera tab kuti uone kudonhedza-pasi zvirevo menyu. Kana chirevo chechimiro chimwe chete chisina kukwana, inzwa wakasununguka kuwedzera akawanda sezvaunoda. Kana mutemo uchifanira kushandiswa kune zvese zvigadzirwa, ingo svetuka danho.
Kutsanangura Mutengo Wengoro Yekutengera Zviito
Nezviito, mitemo yengoro yekutenga muMagento inoreva rudzi rwekuverengera kuderedzwa. Semuenzaniso, unogona kusarudza pakati pePercent yekuderedzwa kwechigadzirwa, Fixed Amount Discount, Fixed amount Discount yengoro yese, kana Tenga X wana Y musiyano.
Sarudza yakakodzera sarudzo mu Shandisa tab yekudonhedza-pasi menyu uye isa huwandu hwekuderedzwa pamwe nehuwandu hwezvigadzirwa izvo mutengi anofanira kuisa mungoro kuti ashandise mutemo wemutengo wengoro.
Iyo inotevera switch inogona kugonesa kuwedzera kuderedzwa kungave kune subtotal kana kumutengo wekutumira.
Kwasara mimwe minda miviri.
The Rasa mitemo inotevera zvinoreva kuti mimwe mitemo ine madhirezi madiki ichashandiswa kana kuti haizoshandiswe kungoro dzevatengi.
Pakupedzisira, unogona kuzadza iyo Conditions tab nekutsanangura zvimwe zvigadzirwa zvinoshanda kune kuderedzwa kana kuisiya yakavhurika kune iyo catalog yese.
Kunyora Mutengo Wekutengesera Mutengo Mitemo
Isai chitaridzi chikamu kana uchitarisira chitoro chemitauro yakawanda.
The chitaridzi chikamu chakakosha kune avo vanomhanyisa mitauro yakawanda ecommerce chitoro sezvo ichibvumira kuratidza iwo mavara mavara mumitauro yakasiyana. Kana chitoro chako chiri chemutauro mumwe chete kana kuti usingade kunetsa nekuisa zvinyorwa zvakasiyana-siyana pamaonero ega ega, unofanira kusarudza kuratidza zita rekutanga.
Asi kushandisa mutauro mumwechete imhosva chaiyo, kudzikisira chiyero chemutengi uye kudzikisira nhanho yeruzivo rwavo rwekutenga online. Saka kana yako ecommerce isiri-mutauro-hushamwari parizvino, tora nguva yako kugadzirisa. Uye wobva wagadzira iyo label yemutemo sereferensi yekushandura.
Nezve Kutarisira Coupon Codes
Kana iwe ukafunga kugonesa coupon kodhi otomatiki chizvarwa, iwe uchafanirwa kuwedzera mamwe chaiwo makuponi ruzivo kuchikamu chino. Isa iyo coupon uwandu, kureba, fomati, kodhi prefixes / suffixes, uye madheshi mumatabo akakodzera uye tinya iyo Sevha mutemo bhatani.
Makorokoto, wapedza basa.
ZANO: Kana ukangogadzira mutemo wengoro imwe chete, unogona kugadzira vamwe vashoma kuita kuti zvideredzwa zvako zvinyanye kuve zvakasarudzika. Kuti ukwanise kufamba mazviri, unogona kusefa iyo mitemo kunze nemakoramu, kuigadzirisa, kana kungotarisa kuburikidza neruzivo rwemutemo.
Mitemo yengoro yekutengera ndeimwe yeAdobe Commerce's Magento 2 zvinhu izvo zvichakubatsira iwe nyore kugadzira mabhenefiti kune vatengi vako pasina kunyora mutsara wekodhi. Nekutevera nhanho-dzakatsanangurwa pamusoro, iwe unozokwanisa kuita yako ecommerce chitoro ive nani kune inogara ichikwira zvinodiwa nevatengi, kukwezva vatengi vatsva kuburikidza nekuparadzira makuponi makodhi pakati pevapesvedzera niche uye kusimudzira yako yakajairika yekushambadzira zano.
Tags: adobe commerceadobe commerce cloudadobe commerce couponadobe commerce coupon mutemo zviitoadobe commerce coupon mitemoadobe commerce yekutenga ngoro mutengo mutemo zviitoadobe commerce yekutengesa ngoro yemitengo mitemoshandisa kuponimitemo yengoro yemitengosei kutimitemo yengoro dzekutengesa magentaMagentomagento 2 zvinhumagento couponmagento coupon rule actionsmagento coupon rule conditionsmagento coupon mitemokubata adobe commerce coupon coldesmitemo yengoro dzekutengesa
Val Kelmuts ndiye Chief Executive Officer uye Co-muvambi pa Staylime, kambani ye ecommerce dhizaini nekusimudzira ine muzinda muRedwood City, California. Ane makore gumi eruzivo mukusimudzira software, manejimendi yekutengesa, uye kusimudzira bhizinesi. Val ndiye Adobe Commerce mutengesi ane mukurumbira nyanzvi, Shopify bhizinesi rakasimbiswa nyanzvi, uye nhengo yePMI.
Adobe Creative Cloud Express: Akanaka Matemplate eSocial Media Content, Logos, uye Zvimwe